Okokhelekayo Level Inzwa Abakhiqizi - China Okokhelekayo Level Inzwa Factory & Abaphakeli
Ugqugquzela Level Inzwa JT606
Ugqugquzela Level Inzwa JT606D
Ugqugquzela Level Inzwa JT606X
Ugqugquzela Level Inzwa JT550
Lobunikazi lomkhiqizo, Best Choice Ukuze Remote Okokhelekayo Ukusetshenziswa Monitoring.
JT606 uchungechunge ngokunemba high uphethiloli ezingeni inzwa yakhelwe sokuphatha ngokucophelela ku petrol. It is ithuthukiswe yi-Jointech ngokuzimela, kuhlangene phezulu inzwa technology emhlabeni, futhi nge ubuchwepheshe ezintsha lobunikazi. Kungaba njalo ukuthola ezingeni ketshezi nge lesinqumo high (<1mm), kanye ulungise obuphelele ukuze uvumelane amathangi ezahlukene amafutha kuyo leyo ndawo, bese ushintsha yasekuqaleni uphethiloli imoto ezingeni inzwa ukuxhuma imitha yasekuqaleni nophethiloli.
Abahlukile Design, Ukuthambekela Leading
Ngokusho iminyaka eminingi nesipiliyoni ukufakwa indawo, ngcono njalo, lokhu unike amandla JT606 unekhono eqinile ukuzivumelanisa ezahlukene kuyinkimbinkimbi zezimboni kanye nezimayini imvelo.
Can anqunywe Okokhelekayo inzwa kungaba unqunywe ngekwesayizi fuel ithangi esizeni Gwema tolerances kubangelwa usayizi okungalungile
High-ngokunemba Recognition ukunemba lingaphansi kuka 1mm I inzwa singakwazi ukubona ukuthi ukuguquguquka ezingeni engaphansi kuka 1mm
Ukufakwa Simple design lobunikazi elula obandayo Flanges Fakela inzwa ayidingi omunye kweshumi izimbobo isikulufa Cindezela inkinobho ekulinganisweni okugcwele ezingenalutho esizeni
Voltage Wide okokufaka, okusezingeni eliphezulu futhi wesifunda Ukuvikelwa 4-70V ububanzi okokufaka voltage ububanzi, qiniseka ukuthi inzwa akuyona ngaphansi kwethonya voltage input. Ukuvikelwa Multi wesifunda, reverse Ukuvikelwa uxhumano, okufutshane Ukuvikelwa wesifunda.
Multi-isignali okukhipha Voltage okukhipha (0-5V), okukhipha wamanje (4-20mA) Ukumelana okukhipha (0-500Ω) Digital isignali okukhipha: RS232, RS485 Hlangana lokuqapha eyihlane nokulawula ngenkathi ushayela lesikali imoto
Abawona Hardware, Experience More Ukwabelana
Jointech uphethiloli ezingeni nomkhiqizi inzwa kuphela, kodwa futhi isixazululo fuel yokugada oversea iklayenti iminyaka eminingi. Jointech uye zanqwabelana isipiliyoni ocebile ukufakwa indawo, inzwa zokuhlanganisa, emuva phansi ukucutshungulwa, kanye nokuhlaziywa umbiko.
On indawo ukufakwa kokuqondisa
Idivayisi ukuhlanganiswa isipiliyoni ukwabelana
Okokhelekayo ukuhlaziywa ukusetshenziswa kwedatha futhi umbiko okukhipha isipiliyoni ukwabelana
JT606 is kabanzi tinhlobo tetimoto futhi imishini emhlabeni.
Logistics zokuthutha iloli